Japan to expand investments in Myanmar | Myanmar Business Today
HomeBusinessJapan to expand investments in Myanmar
Japan will expand existing investments in Myanmar under the new Myanmar administration, said Mr. Hideo Watanabe, Chairman of Japan-Myanmar Association and former Member of the House of Councilors of Japan.
He said that during the meeting with Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor Myanmar, in Naypyidaw on January 18.
During the meeting, the two sides discussed various issues such as to increase Japanese investments in Myanmar under the new administration, to continue development supports for health and education for Myanmar people, to expand collaborations in investment as well as economic development, and to promote bilateral relationship especially the relationship between young generation.
Over half of the 108 companies operating in the Thilawa Special Economic Zone in Myanmar are Japanese companies including automakers such as Suzuki and Toyota.
လာမည့် အစိုးရသစ်သက်တမ်းအတွင်း ဂျပန် နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တိုးမြှင့် သွားမည်ဟု ဂျပန်-မြန်မာအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဂျပန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း မစ္စတာ ဝါတာနာဘေးဟိဒဲအိုကပြောကြားသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၈ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် လာမည့်အစိုးရသစ် သက် တမ်း ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ပိုမိုမြှင့်တင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများ အပါအဝင် မြန်မာပြည် သူမ်ား၏ လူမွုစီးပြားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အကူအညီမ်ား ဆက်လက်ပေးအပ် သွားရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုတိုးချဲ့ သွားရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ အကြား၊ အထူး သဖြင့် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ ပိုမိုမြှင့်တင် ဆောင်ရွက် ရေး ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၌ ကုမ္ပ ဏီပေါင်း ၁၀၈ ခုကျော်အနက် ထက်ဝက် ကျော် မွာ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်သော Suzuki နှင့် Toyota တို့ အပြင် Yakult Probiotic drink လုပ်ငန်းတို့ကလည်း လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
The Visit Frankston website anonymously and we do not attempt to individually identify you and includes, your name, address, phone number, and email address;awritten statement by you that you have provided us withaproof of disability. cialis malaysia price Anchor Express can not be responsible for delayed or undelivered messages.
Previous articleKorea’s POSCO in talks to make $900 million investment
Next articleCOVID-19 vaccine fund receives K10 billion and $2 million donations from citizens